Ururka Gabdhaha Suxufiyiinta oo tababar u qabtay 30 haween ah “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ururka Gabdhaha Suxufiyiinta oo tababar u qabtay 30 haween ah “SAWIRRO”
Siminaarkan lagu baranayay doorka ay haweenka ku leeyihiin siyaasadda iyo doorashada dalka ee sanadkan 2016-ka ayaa waa loo qabtay sodon haween ah oo ka kala socda gobolada dalka, bulshada rayidka, qaar ka mid ah Jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo gabdho suxufiyiin ah waxaana iska kaashaday ururka Gabdhaha Suxufiyiinta ah iyo hay’adda horumarinta Waxbarashada.
Siminaarkan ayaa waxaa lagu baranayay doorka haweenka ee ku aadan ka qeyb galka siyaasadda iyo doorashada la filayo dalka in ay ka dhacdo sanadkan.
Guddoomiyaha ururka gabdhaha suxufiyiinta ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SWJ Farxiya Maxamed Kheyre ayaa sheegtay in ujeeddada ay ka leeyihiin tababarada noocaan ah uu yahay inuu muuqdo doorka haweenka Soomaaliyeed, iyadoo u jeediyay hadal dar daaran ah oo ku aadan in haweenku ay noqdaan kuwa ka qeyb qaata hanaanka doorasho ee dalka.
Madaxa Mashaariicda ee Hay’ada Horumarinta Waxbarashada Maxamuud Cali Salaad ayaa sheegay in tababarkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay haweenka Soomaaliyeed, loona baahanyahay ka qeyb galayaashu inay ka faa’iideystaan.
Ururka gabdhaha Suxufiyiinta iyo hay’ada horumarinta waxbarashada ayaa mudooyinkii dambe waxa ay wadeen tababarada noocaan ah oo ay u qabanayeen haweenka Soomaaliyeed.
Hoobiyeyaal dad rayid ah ay ku dhinteen oo ku dhacay Xero ay deganyihiin dad barakacayaal ah
Baarlamaanka oo akhrinta saddexaad mariyay sharciga Qaxootiga